Fametahana bilaogy: Lendo.org | Martech Zone
Misaotra an'i André tamin'ny fangatahako torohevitra voalohany tamin'ny fiteny hafa! Lendo.org (nadika: Mamaky) dia bilaogy iray avy any Brezila momba ny famerenana boky, famakafakana literatiora, teôria akademika momba ny literatiora, fiteny, sanganasa, poezia ary maro hafa!
Misaotra Dikanteny Google, Afaka namaky tokoa ireo lahatsoratra aho ary nijery akaiky ilay tranonkala. André dia mpamaham-bolongana mahafinaritra ary azonao atao amin'ny asa sorany fa manao izany izy mba hizarana ny fitiavany ny mpihaino azy.
Ny fahitana fotoana hanatsarana ny Lendo.org dia tolona, ​​nanao asa mahatalanjona izy tamin'ny fanatsarana ny bilaoginy - tsy isalasalana fa mandoa izany! Mahafinaritra ny fanoratan'i André (hitako na dia amin'ny fandikana aza) ary misy sary miparitaka amin'ny ankamaroan'ny lahatsoratra - manome sary tsara ho an'ny atiny.
Ny marika RSS dia iraisan'ny rehetra amin'ny fikitihana sy fisoratana anarana amin'ny fahana. Ao amin'ny pejin-tranonao, ny rohy dia manana rohy mankany amin'ny lahatsoratra iray amin'ny "Inona ny RSS?" fa ny rohy hampiarahana ny fahana kosa tsy mandeha (farafaharatsiny tsy ao amin'ny Firefox amin'ny Mac). Mino aho fa afaka manova ny div ianao mba hahafahanao mamela roa… raha misy olona manindry ny marika RSS dia hoentina any amin'ny adiresy fahana anao izy ireo. Raha tsindrio ny rohy amin'ilay lahatsoratra dia mbola afaka mamaky ilay lahatsoratra izy ireo:
Azonao atao ny mametraka ny "cursor: pointer" ao amin'ny fisie CSS anao fa tsy ny fanambarana div.
Hanova ny famaritanao div (
) mankany amin'ny lohateny lohateny h2. Hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fahazoana ireo teny voatanisa amin'ny motera fikarohana ireo fa tsy div tsotra.
Ny zavatra voalohany tsikaritro rehefa tonga tao amin'ilay tranokala aho dia hoe tsy nisy atiny 'ambonin'ny vala' mihitsy. Izany hoe tsy maintsy nivadika aho mba hahazoana izay notadiaviko. Ara-kolontsaina, tsy azoko antoka raha eken'ny mpihaino anao izany fa manadoka ireo olona toa ahy tokoa. Azonao atao ny manandrana manambatra ny lohatenin'ny bilaoginao, ny famaritana ary ny pejy tsirairay ao anaty div marindrano iray izay manala ny haavon'ny pejy maro izay very ankehitriny. Izany dia hampihena ny halavany izay ampiasaina amin'izao fotoana izao ho an'ireo singa vitsivitsy izay misy.
Tiako ny layout miaraka amin'ny fizarana fampahalalana ao amin'ny faran'ny pejy, saingy tena gaga aho fa teo izy! Raha misy fomba ahafahanao manaingo ny lohan'ny bilaoginao mitovy amin'ny an'ny tongotry ny pejy, dia ho tsara kokoa izany. Azonao atao mihitsy aza ny mampiantso ny sain'ny pejy amin'ny alàlan'ny fametahana tsoratadidy More (mais?) Miaraka amin'ireo bokotrao pejy hafa izay mampiakatra ny mpamaky mankany amin'io faritra io.
Tena manokana sy azo zahana olona ny asa soratra, saingy tsy azoko antoka raha mifanaraka aminy ny filaharana. Na dia amin'ny fandikan-teny aza dia fantatro ny fitiavanao mamaky. Ny sary (anao?) Mamaky dia mahafinaritra. Te-hahita karazana sary eny ambonin'ny pejy koa aho. Angamba sarinao hafa na sarin'ny boky voakilasy kanto ao anaty sary.
Ny pejy About (sobre?) Dia mety hahasoa. Iza ianao? Fa maninona ianao no maniry hamaky? Inona no nahatonga anao nanomboka ity bilaogy ity?
Na dia amin'ny Google Translate aza dia hitako fa ny fahaizan'i André manoratra dia mihoatra lavitra noho ny ahy. Sendra lahatsoratra iray mahaliana momba ny fahasamihafan'ny manoratra amin'ny alàlan'ny solosaina na amin'ny pirinty.
Asa mahafinaritra, André! Misaotra betsaka tamin'ny fangatahana ity torohevitra ity!
Tags: famaritanaDIVaforetogoogle translatevaovaompampindram-bolakisary rssmarika rssurchintracker
Fametahana bilaogy: Hamelife
Jul 8, 2007 amin'ny 11: 49 AM
Torohevitra mahafinaritra Douglas!
Niasa maharitra aho mba hanatsarana ny bilaogy ary tena faly aho mahafantatra fa tianao ny atiny, na dia amin'ny fandikan-teny aza.
Misaotra betsaka amin'ny torohevitra sy teny fiderana!
Hataoko tsy ho ela ireo fanovana ireo ary hiverina eto hilaza ny valiny.
8 Jul 2007 amin'ny 12:44 PM
Azafady, André! Te-hihaino aho.
8 Jul 2007 amin'ny 12:08 PM
Misaotra namako! Tena naman'i Andre aho ary mpanoratra!
Jul 10, 2007 amin'ny 11: 49 AM
Salama indray Douglas!
- Ny rohy RSS
- Ny tagy famaritana (manana hatsaran-tarehy h2 aho izao :))
- Ny fiovana eo an-tampony, mba hamoahana ny haavo lehibe ary "hanatsarana" ary hampifandray azy amin'ny tongotra
- Nanoratra pejy "momba" 😉
- Mametraha rohy "bebe kokoa" ho vatofantsiky ny footer
- Ampitomboy amin'ny totalitra 1024 × 768 ny totaliny
- Ampidiro ny haavon'ny tsipika, mba hahalalana lahateny amin'ny votoatiny tsara kokoa
Tiako be ny valiny! Mbola manana antsipirihany vitsivitsy hamboarina aho, saingy mieritreritra aho fa tsara kokoa ny bilaogiko ankehitriny!
10 Jul 2007 amin'ny 2:11 PM
Oay! André ilay tranonkala dia toa mahafinaritra be! Aorian'ny herinandro vitsivitsy, avelao aho azafady ny vokatr'ireo fanovana ireo. Tokony manomboka mahita fiakarana miandalana ianao rehefa mandeha ny fotoana.
17 Jul 2007 amin'ny 1:15 PM
Rey olona ô! Manahirana be aho amin'ny google ary miova ny URL = (
Pejy maro no nafenina tamin'ny valiny, ary tena ratsy be ny fifamoivoizako = (
Ny valiny avy amin'ny fanovana ny layout dia maharitra volana maromaro. Pitty io ..
17 Jul 2007 amin'ny 2:40 PM
Inona no niova tamin'ny URl, André? Angamba azonao atao ny manaisotra ny redirect raha toa ka niova ny URI an'ny lahatsoratra. Ampahafantaro ahy raha afaka manampy amin'ny fomba rehetra aho.
17 Jul 2007 amin'ny 2:48 PM
Misaotra amin'ny alàlan'ny fanampiana Doug! Fa nanova ny firafitra avy amin'ny default% date% /% postname% ho% postname% fotsiny aho ary mampiasa ny plugin fifindra-monina permalink an'i Dean mba hanaovana redirection 301. Na izany aza, nofoanana ny laharako amin'ny motera fikarohana.
Heveriko fa tsy misy fomba hanamboarana an'io. Miandrasa laharana vaovao fotsiny = (
Aug 24, 2007 amin'ny 9: 09 AM
Rehefa nandeha ny fotoana dia natontona indray ny pejiko ary, ny nahagaga ahy dia nitombo 400% ny fitsidihana! Oay!
Ny valin'ny ezaka nataoko SEO sy ny fampiharana ny toro-hevitrao dia mahafinaritra!